Sheekada filimka Hate Story IV: qayaanadii, dareenkii iyo heesihii aad kaga baratay taxanahan kama weyn doontid qaybta 4-aad – Filimside.net
Sheekada filimka Hate Story IV: qayaanadii, dareenkii iyo heesihii aad kaga baratay taxanahan kama weyn doontid qaybta 4-aad
Taariikhda: March 9, 2018
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Hate Story 4 oo ah taxane caan ku ah qayaano, heeso hirgaleen iyo dareen isku soo dhawaansho oo taxanahaan lagu gado.
Jilaayaasha filimkan: Karan Wahi, Urvashi Rautela, Ihana Dhillon
Qiimeynta sheekada filimkaan: 3/5 (sedex xidig)
Muxuu ku wanaagsan: Urvashi Rautela soo quruxdeeda jiidashadeeda gaarka ah iyo Karan Wahi bandhigiisa heerka sare ah ayaa kusoo jiidan doonaan.
Muxuu ku liitaa: Sheekada waa midii aad ku taqiinay taxanahaan aar gudasho, jaceyl qayaano ku dheehan, heeso hirgaleen iyo dareen isku soo dhawaansho, micnaha wax cusub kuma arkeysid.
Fariinta Filimka Hate Story IV Oo Kooban: Filimkaan wuxuu ku saabsan yahay gabbar xariif ah oo labo walaalo oo hantiilayaal ah dhibaato ka dhex abuureyso markii ay mid walbo si gaar ah usoo jiidato.
Tasha (Urvashi Rautela) waxay imaaneysaa London si ay gabbar caan ah u noqoto laakiin waxay weyneysaa inay hesho wado ay guulo ku gaarto.
Laakiin nasiibka ayaa la kulansiinayo gabadhaan London ku dhiban wiilka sawir qaadaha ah Rajveer (Karan Wahi) ee jecel inuu gacanta ku dhigo marwalbo gabdhaha quruxda badan.
Rajveer (Karan Wahi) wuxuu ka helaa Tasha kadibna walaalkiis Aryan (Vivan Bhatena) oo masuul ka ah ganacsigooda ayuu tallo ahaan ugu soo jeedinaa inuu Tasha shaqo siiyo.
Aryan (Vivan Bhatena) iyo gabadha uu guursan rabo ee u alkuman Rishma (Ihana Dhillon) waxay baadi goob ugu jireen gabbar qurux badan oo u xayeysiiso kareemka la isku qurxiyo oo ay shirkadooda soo saarto waxayna ka helayaan qaab dhismeedka iyo muuqaalka Tasha ayagoo si dhaqsi ah shaqo ku siinayaan.
Tasha (Urvashi Rautela) si dhaqsi ah ayay caan ku noqoneysaa laakiin labadii walaalaha ahaa Rajveer (Karan Wahi) iyo Aryan (Vivan Bhatena) waxay ka wada helayaan Tasha ayagoo ku loolamayaan midkii gabadhan shidan gacanta ku dhigi lahaa.
Laakiin Aryan iyo Rajveer aabahood Vikram Khurana (Gulshan Grover) kaasi oo milyaneer ah una tartamaayo doorashada duqa magaalada London ayaa labadiisa wiil ka codsanaayo inay caga dhigtaan sidoo kalena ceeb usoo jiidin madaama ay saxaafada ka faa’iideesan karto inay isku heestaan gabadhii ay shalay shaqada siisay isagana sharafkiisa wax soo gaari karaan doorashadana looga guuleesan karo.
Laakiin arinta faraha wey ka baxeysaa markii ay Tasha gacanta ku dhigto labada walaalo Rajveer iyo Karan mid walbana ay dareen la wadaageyso waxaana fursadan ka faa’iidesanayo qof aan la garaneyn oo duubano waxa dhex maraayo Tasha iyo labada walaal kadibna kiis dil ah ayaa dhacaayo!
Kadib waxa xiga ee dhici doono ayaa filimkan loo daawan doonaa:
Sawirada qofka qaaday ee gogolka dhaafka Tasha labada walaal la sameeneyso?
Cidda dilka geesatay?
Aabo Vikram Khurana (Gulshan Grover) hamigiisa doorashada duqa London ma bur buri doonaa?
Labada walaal midkee qaldan mid keesa saxan?
Tasha maxay damacsan tahay, ma qof daacad ahaa mise waa qof qorshahan dhan maleegtay?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Hate Story 4: Director Vishal Pandya waa xariif iskama qaldo marwalbo xeerka taxanahiisa madaama qayanaada, jaceylka, dareenka iyo heesaha hirgaleen uu isku dheeli tiro.
Kaliya waxaa wacnaan laheyd in jilaayaal caan ah uu Hate Story 4 isugu keeno laakiin ma jiraan xiligaan jilaayaal magac leh oo dhar dhigasho iyo dareen xad dhaaf ah inay shaashada ku muujiyaan!
Sidoo kale hadalada lagu hadlaayo filimkaan (Dialogue) waa mid si wacan loo diyaariyay sidoo kalena ay siweyn isku xifaaleesanayaan hogaamiyaasha filimkaan.
Muusigada filimkan waa mid kala kacsan oo lagu saleeyay muuqaalada dareenka ku dheehan waxaa ugu shidan Aashiq Banaya Aapne’ kadibna heesaha kale Boond Boond Mein’, ‘Badnaamiyan’ iyo ‘Tum Mere Ho’ waa kuwo kala kacsan.
Bandhiga Jilaayaasha Filima Hate Story 4: Atirishada Urvashi Rautela waxba ma reebanin madaama ay filimkan udub dhexaad u tahay dareen xad dhaaf iyo soo jiidasho dheeraad ah ayay la timid dhab ahaantii jiliinkeeda filimkaan dhalinta ma xasuusan doonaan ee waxay ku xasuusan doonaan muuqalada dareenka ku dheehan ay shaashada ku sameesay.
Karan Wahi shaqo wacan ayuu filimkan ka qabtay doorkiisana waa mid wacan sidoo kalena Vivan Bhatena isagana doorkiisa ma adko laakiin wuu ka baxsaday sidoo kale Ihana Dhillon iyadana wey shidan tahay laakiin muuqaalkeeda ayaan badneyn.
Ruug cadaa Gulshan Grover door wacan oo mada daalo leh ayuu Hate Story 4 ka qaatay weyna ka heli doonaan taageerayaashiisa madaama uu mudo kadib shaashada kusoo laabtay.
Gunaanad: Hate Story 4 waa hubaal inay ka heli doonaan dhalinta taxanahan ku taxan ma xambaarsano fariin cusub laakiin wixii lagu yaqiinay taxanahan waa laga wada heli doonaa sidaa darteed inuu ganacsi wacan sameyn doono fagta hore ayay u badan tahay.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Hate Story IV goos gooskiisa:
Waxaa Aqrisay 1,438